မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: စင်ကာပူရောက် တစ်နေ့တာအမောများ
အလုပ်ကတော့မရသေးပါ။ ရှာဖွေဆဲ။ ရှာပုံတော်မင်းသားကြီး သီချင်းပဲညည်းမိတယ်။ဒီနေ့စနေနေ့အမှန်မှာက Strait Times သတင်းစာလေးဝယ် ဖတ် ပြီးတော့ အလုပ်လျှောက်တချို့ဆို ၁၅မိနစ်တခါလောက် အွန်လိုင်းကတက်လာတဲ့ vacant post လေးတွေလျှောက်လိုက် ချတ်တင်းပြောလိုက် အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်အဲသလိုဆိုလဲ နိပ်သဗျကျမကတော့ တနေ့တနေ့ မနက်မနက် ၂နာရီ ၃နာရီကျော်မှအိပ်၊ တခါတလေ ၄နာရီမှအိပ်အဲဒီတော့ မိုးလင်းအိပ်တော့ နေဖင်ထိုး (အဲ ကျမအခန်းကမထိုးဘူး အဟီး) မနက်ကြီး ၉နာရီလောက် စိတ်ပုတ်တဲ့သူတွေ ဖုန်းခေါ် မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီး နှိုးမှနိုး၊ ကပျာကယာ ကုန်းရုန်းထ သွားစရာရှိတာ သွား။ ကံကောင်းတဲ့နေ့ အနှိုးခံမထိရင် ၁၁ခွဲလောက်ထိအိပ်။ အဲဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်နေတာ။ဒီကနေ့မနက်လဲ ထုံးစံအတိုင်း ၉နာရီမှ နိုးလို့ သတင်းစာလဲဝယ်ချိန်မရ။Job fair သွားဖို့ ချိန်းထားလို့ ပြင်ဆင်ပြီး အမြန်ထွက်။မနက်စာတောင် တစ်ခန်းတည်းနေတဲ့ သူမက နို့ထမင်းချက်ထားကျွေးလို့ တော်ပါသေး။ဘတ်စ်စောင့်စီးပီး city hall သွား အဲဒီကနေ ပင်နင်စူလာမှာ resume ကို print ထုတ်ပြီး ကော်ပီ ၅စုံလောက်ဆွဲသွားရသေးတယ်။စောသေးလို့ ဆိုင်တွေတောင် ကောင်းကောင်းမဖွင့်သေးဘူး။ စံချိန်မီ ရွှေမြန်မာဆိုင်များပါပဲ။ပြီးတော့ city link mall ကနေ လမ်းလျှောက်လို့ Suntec City Convention Centre ကိုရောက်။ဟော ထုံးစံအတိုင်း Qနေပါပီ တစ်သီတစ်တန်းကြီးအဲဒီနား ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်ရပ် ပြီးမှ ဝေနေတဲ့ survey စာရွက်လေးတောင်း မဖြည့်ပဲကိုင်ထားပြီး ဟိုဘက်ဒီဘက်လျှောက်အော် တောသူမြို့ရောက် တောသူမြို့ရောက် မအူမလည်နဲ့ ဘာလုပ်လို့ ဘယ်သွားပြီး ဘယ်သူ့မေးရမှန်းမသိ။ဒီကို မလာခင် Job fair ဆိုတာဘာလဲ ဘယ်လိုသွားရမလဲ ဘာတွေပြင်သွားရမလဲဆိုတာ ဒီသတင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုပဲလှမ်းမေးထားတာ။သူပြောပြကတည်းကတော့ booth တွေရှိမယ်။ ကျောင်းတွေကလဲ သူတို့ကျောင်းတွေတက်ရင် ဒီလိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရမယ်ဆိုပြီး ရိုက်စားလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး vacancy post တွေလဲကြော်ငြာထားမယ်။ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ရင် ၀င်လျှောက်ပီး သူတို့သဘောကျရင် တခါတည်း interview တတ်သတဲ့လို့ ကြိုပြောပြလိုက်သား။ခုတော့ တန်းစီနေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတွေ့တယ်။ လက်ထဲမှာလဲ စာအုပ်ကိုယ်စီတွေ့ရဲ့။ အဲဒါ ဘယ်ကရကြပါလိမ့် လိုချင်လိုက်တာနော်ပေါ့အဲလိုနဲ့ ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ် Invest Fair 08 တဲ့ seminar တွေဗျ အခန်းသုံးခန်းမှာ။ အဟီး ကိုယ်နဲ့ဆိုင်လောက်ဘူး invest လုပ်ဖို့ပိုက်ပိုက်မှ မရှိတာနော် တကယ်ပဲ။ အဲဒါနဲ့ တန်းစီတဲ့သူတွေကို ပြန်ကျော်ပြီး ပြန်သွားတော့မှ စာအုပ်လဲဝေနေတာရတယ် (Jobs Central Event guide book) ပြီးတော့ စောစောက survey လေးကိုဖြည့်ပီး ၀င်လို့ရမတဲ့။ အိုကေ လာခဲ့ ကြုံသလိုလေး ဖြတ်ကျော်ဝင်လိုက်တယ်။ အထဲရောက်သွားတယ်။ အမယ်မယ် booth တွေအများကြီးပဲ စစချင်း Police booth အဲဒါ ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ဘူး။ ဟိုဘက်ထပ်လျှောက် ကျောင်းတွေဖြစ်နေတယ်။ အင်း ကျောင်းလဲတက်ချင်ပါဘူး။ စာအုပ်လှန်ကြည့် အဲတော့မှ jobs listings ထဲမှာ company တွေ 49 ခုလောက်ရှိတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပို့စ် ရှိတဲ့ company တွေနာမည်အရင်ရှာလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ booth တွေမှာ ရှာကြည့်။ သူများတွေကိုလဲအကဲခတ်။ အလားလား များလိုက်တဲ့ phillipines တွေ သွက်မှသွက်။ ကိုယ့်ရွှေတွေ သိပ်မတွေ့သလားလို့။ resume တွေယူလာတာတွေ ပေးလိုက်။ cv form တွေတောင်းပီး ထောင့်မှာ သွားထိုင်ပီး ဖြည့်တဲ့သူတွေကဖြည့်နဲ့။ တချို့ company တွေက computer နဲ့ online form တခါတည်းဖြည့်ခိုင်းတာလဲတွေ့တယ်။ အိုကေ ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီ။ စောစောက တေးမှတ်ထားတဲ့ company တွေ လိုက်ရှာ ဟောတွေ့ပြီ တစ်ခု။ ဒီပို့စ်ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်ပေါ့။ resume တောင်းတာနဲ့အသင့်ကော်ပီကူးထားတာ ထုတ်ပေးလိုက်တော့ ဖတ်ကြည့်ပြီး ဟိုမေးဒီမေးပေါ့။ ပြီးတော့ transcript တွေလဲတောင်းလို့ ကော်ပီထပ်ပေးပေါ့။ ကိုယ်က foreigner/social visit pass နဲ့မလို့ လျှောက်လို့ရလားလဲမေးရသေးတယ်။ ရတယ်ဆိုမှနော်။ တချို့ company တွေက local ပဲခေါ်တာပါဆိုလို့ မပေးရဘူး။ ချက်ချင်းတော့ interview လုပ်ဘူး သူတို့မန်နေဂျာ အပြင်သွားလို့တဲ့။ interview အတွက် ပြန်ခေါ်ပါမယ်တဲ့ ကဲ..ဒီလိုနဲ့ ဟိုသွားဒီသွား ဟိုရှာဒီရှာ တေးမှတ်ထားတဲ့ list လဲကုန်တော့ ပြန်လာတာပေါ့။ လျှောက်သွားရင်းနဲ့တော့  brochure တွေ ကံစမ်းမဲတွေ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ကြုံသလိုယူလာသဗျ။အဲဒီကပြန်လာတော့ မြန်မာကျူးပစ်က သူငယ်ချင်းအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းထားလို့ ပင်နင်စူလာမှာ နေ့လည်စာစားရင်းသွားတွေ့။ထုံးစံအတိုင်း မတွေ့တာကြာပီဖြစ်၍ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်များကို တော်ကီပွား(ဘလော့ဂါ မဟုတ်)နေ့လည် သုံးနာရီမှာ appointment နောက်တစ်ခုအမီအတွက် ၂နာရီကျော်တော့ စကားဖြတ်ပြီး ခရီးဆက်တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ city hall ကနေ ဘတ်စ်စီးပြီး vivo City ရဲ့ Rooftop ကိုဗျာအဲဒီမှာ MMITPros က ငအ ပလုံဖက်ရှင်နယ်(ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတာပါ) မင်ဘာများ တွေ့ဆုံပွဲလေးကိုသွားတယ်လူတွေများတယ် ဒါပေသိ မြန်မာစံတော်ချိန်အတိုင်းနောက်ကျ၏ ပေါ့၂၅ယောက်ကျော်သမို့ တပျော်တပါးကြီးပဲ(အဲ့အထဲမှာ ဘလော့ဂါ နဲနဲပါတယ် ရှာကြည့်နော်)မိတ်ဆက်ကြတယ်။ ဆွေးနွေးကြတယ်။ စားကြသောက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဓာတ်ပုံတွေလဲရိုက်တယ်။ပြန်လာတော့ ၆နာရီလောက်ရှိပီ။ MRT စီးပြီး Dohby Gaught ရောက်တော့ အနီလိုင်းပြောင်းစီးတာ platform မှားလို့ toapayoh မရောက်ပဲ Marina Bay ပါသွားသဗျ။ ကယ်တော်မူပါ။ဘာရမလဲ ဂိတ်ဆုံးတော့ ပြန်လိုက်လာတာပေါ့။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ၇နာရီခွဲ။ဗိုက်နဲနဲဖြည့်တုန်း ဖုန်းဝင်လာတယ်။ ပိုက်ဆံလာယူဖို့ချိန်းထားတဲ့သူဆီက( ဆီမီနာအတွက် စပွန်ဆာ ဟုတ်သေးဘူး အဟီး)အဲဒါနဲ့ တိုးပါရိုး interchange ကိုပြန်သွား အဲဒီသူကိုရှာပြီး ပိုက်ပိုက်ယူပြီး စကားတွေပြောစရာရှိတာပြော။အမယ်လေး မောလိုက်တာ။ ည ၉နာရီထိုးမှ ပြန်လာ။အပါးပါး။ ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့် (ဒါလဲ ဘလော့ဂါ ဟုတ်ဘူးနော်)။ လမင်းကြီးသာနေတယ်။အော် လပြည့်ညပါလား။ ဘာရမလဲ ၀ရန်တာ လမ်းမကျယ်ကြီးကို တစ်ယောက်တည်းအပိုင်စီးပြီး FM ကသီချင်းတွေနားထောင်ရင်း လမင်းကြီးသာနေတာကို အပြတ်ခံစားပစ်လိုက်တယ်။ လကြီးဝိုင်းစက်နေရင်လဲ လွမ်းတယ်ဗျ(လှိုင်းပုတ်သံတွေကြားလည်း လွမ်းတတ်တာပဲ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပြောပြဖူးတယ်လေ)၁၀နာရီထိုးတော့ အခန်းကိုပြန်လာလိုက်တယ်။ အိုးးးး ဒီနေ့ လုပ်ရမှာတွေ ကျန်သေးတယ်။အွန်လိုင်းတက်ရမယ်။ မေးလ်တွေစစ်ရမယ်။ အလုပ်လျှောက်ဖို့ ကျန်သေးတယ်။မြန်မာကျူးပစ်ထဲ ၀င်စရာရှိတယ်။ MMITPROS မှာလဲ ဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့် နေကြာကွာစိပြောရမယ်။ MBS မှာလဲ ဘလော့ဂ်ဆီမီနာအတွက် ကဗျာစုစပ်နေတာ တပိုင်း(နဲတယ် ထင်တယ် ရေချိန်ကိုက်လောက်ဘူး အဟီး) ၀င်ရှဲလ်ဖို့ ရွာစားကဒေါင်း ကပြောထားတယ်။အင်း အဲဒါတွေပီးတော့ ပို့စ် ဒီပို့စ်တင်ရမယ်။ချစ်လေပြေက လာဖတ်မတဲ့။ အော် job fair နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့။ သူက အလုပ်ရပီးသားမလို့ မသွားတာကြာပေမဲ့ နက်ဖန်တော့ သွားမတဲ့၊ ဘာတဲ့ 4ထပ်မှာ တော့ Loreal sale ရှိသတဲ့လေ...ကဲ .. ပြီးပီမနက် ၃နာရီ၁၅မိနစ် အိပ်ပီဗျို ဂွတ်မောနင်း (စိုးဇေယျကြီး နှုတ်ဆက်သလိုပဲ ကင်းကောင်ရေ နင့်ကို သတိရသွားပီဟ)
Thanks for sharing. I think your writing style is the best. So I will call you Ms Best.
တနေ့တာ အမောလေးတွေပဲ ရှိသေးတယ်ကိုး မမီ။ နောက်ဆို အလုပ်ရရင် တစ်လတာအမောကြီးတွေ လာဦးမယ်ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဆရာမတစ်ယောက်ပြောဖူးသလိုပါပဲ။ အပျော်ကြီးကြီးတွေကို လိုချင်ရင်တော့ အပျော်လေးတွေကို လျော့၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောဖူးသလိုဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မခိုင်းရင် သူများက ကိုယ့်ကို ခိုင်းသွားမယ်တဲ့။ မောချင်မောပါစေ။ တောင့်ထား မမီရေ။
sis that is the life of singapore u will be use to its around6months by the say wanna ask u something have u already apply EPEC that is good for the people who come n look for the job from myanmar. if u wanna know anything u can send msg to me at MBS my nick freeRhythmif u know already its okgood night